देशभर डढेलोको त्रासः एकै दिन ७२८ स्थानमा डढेलो, कुन जिल्लामा कति ? « Drishti News – Nepalese News Portal
देशभर डढेलोको त्रासः एकै दिन ७२८ स्थानमा डढेलो, कुन जिल्लामा कति ?
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय यसरी नै मानिसको ज्यानै लिने डढेलो फैलिँदै गएको छ । विभिन्न वन क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा रहेको डढेलोबाट मृत्यु हुनेको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुने क्रम जारी छ ।
त्यस्तै कञ्चनपुरमा २५, मकवानपुरमा २१, पर्सामा १७, जाजरकोटमा १६, अर्घाखाँचीमा १५, खोटाङ/अछाममा १३/१३, दैलेख र कपिलवस्तुमा १२र१२, नवलपुरमा ११ र सिन्धुलीमा १० स्थानमा डढेलो लागेको छ । राष्ट्रिय विपत् जो खिम न्यूनीकर ण तथा व्यवस् थापन प्राधिकर णका डढे लो विज्ञ सुन्दर शर्माका अनुसार अबको डेढ महिना नेपाल डढेलोको उच्च जोखिममा छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।